Inona no Azonao Atao Raha Manahy Foana Ianao?
Betsaka ny Zavatra Mampanahy ny Olona
“Nandeha nividy sakafo aho nefa bisikoỳ fotsiny no hitako, sady tena lafo be ilay izy. Tsisy sakafo namidy intsony ny ampitson’iny.”—Paul, any Zimbabwe.
“Nilaozan’ny vadiko aho. Tsy zakako hoe namadika ahy izy. Dia hanao ahoana izao ny zanako?”—Janet, any Etazonia.
“Vao maneno ny fanairana, dia lasa haingana aho miafina. Midaboka amin’ny tany aho rehefa mipoaka ny baomba. Mbola mangovitra be foana ny tanako, ora maro aorian’izay.”—Alona, any Israely.
Betsaka ny zavatra mampanahy ny olona satria “fotoan-tsarotra tsy mora setraina” izao. (2 Timoty 3:1) Maro no sahirana ara-bola, na mikorontana ny fianakaviany, na mipetraka any amin’ny tany misy ady, areti-mandringana, loza voajanahary, na loza vokatry ny nataon’ny olona. Eo koa ireo manahy, ohatra hoe: ‘Sao dia hivadika kansera io zavatra mivonto eo amin’ny vatako io?’, na hoe: ‘Hanao ahoana ny fiainan’ireto zafikeliko ireto any aoriana any?’
Tsy ratsy foana ny hoe manahy. Matahotra kely, ohatra, isika rehefa hanao fanadinana, na fampisehoana, na hitady asa. Mitandrina koa isika rehefa misy loza atahorantsika, ary mahasoa antsika izany. Mankarary anefa ny manahy tafahoatra na manahy foana. Araka ny fanadihadiana natao vao haingana tamin’ny olona 68 000 mahery dia atahorana ho faty aloha be ny olona na miady saina kely fotsiny aza. Misy antony matoa i Jesosy niteny hoe: “Iza aminareo no mahay manalava ny androm-piainany, na kely monja aza, rehefa manahy?” Tsy manalava androm-piainana tokoa ny fanahiana. Hoy àry i Jesosy: “Aza manahy intsony.” (Matio 6:25, 27) Ahoana anefa no hahavitana an’izany?
Mila manana fahendrena ianao ary miezaka mba hatoky tanteraka an’Andriamanitra sy hahazo antoka hoe ho tsara ny hoavy. Mety handia fotoan-tsarotra daholo isika. Ahoana no nampiharan’i Paul sy Janet ary Alona an’ireo soso-kevitra ireo?
Hizara Hizara Betsaka ny Zavatra Mampanahy ny Olona
Afaka Manampy ny Lehilahy Miady Saina ve ny Baiboly?
Miady Saina Be ve Ianao?